ချက်ပြုတ်ပုံနည်းလမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးအရသာနဲ့ပါ၀င်တဲ့အာနိသင်တချို့ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ အစားအစာလေး ၅မျိုးအကြောင်း | MyFood Myanmar
ဒီကနေ့ ပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ချက်ပြုတ်ပုံနည်းလမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး အရသာနဲ့ပါ၀င်တဲ့ အာနိသင်တချို့ ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ အစားအစာလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အရင်ကတည်းကသိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအားလူကိုချက်ပြုတ်စားသုံးတဲ့အခါ အာလူ:ကိုမကျက် တကျက် အနေအထားအတိုင်း သုပ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအသုပ်တွေနဲ့ရောစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုစားသုံးခြင်းတွေက ပိုပြီးစားကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့မသိလိုက်တာကတော့ အားလူကိုကြော်ပြီးချက်ပြီးစားသုံးခြင်းဟာ ပိုပြီးအရသာကောင်းသလို အစာအိမ်အတွက်လည်း ချေဖျက်ရာမှာ ပိုပြီးလွယ်ကူစေကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာသိလာရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အားလူကဲ့သို့ပဲ တစ်ချို့အစား အစာတွေဟာ ချက်ပြုတ်ပုံကို မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအရသာတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲ ဘယ်လိုအာနိသင်တွေ ပိုရလဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်….
ပထမတစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးနီးပါး နေ့စဉ် စားဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျော်သီးပါပဲ
အကယ်၍ သင်ဟာဆီးချိုအခံရှိတယ်ဆိုပါစို့ ငှက်ပျော်သီးအစိမ်း သို့ ဝင်းရောင်သန်းနေတဲ့ငှက်ပျော်သီးဟာ မှည့်နေတဲ့ငှက်ပျော်သီးထက် ပိုပြီးသကြားပါ၀င်မှုလျော့နည်းလို့ ဆီးချိုသမားတွေအတွက်သင့်တော်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကဆိုထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မှည့်လာတဲ့အခါမှာ ငှက်ပျော်သီးမှာရှိတဲ့ ကစီဓာတ်တွေဟာ သကြားအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလို့ပါပဲ။ တစ်ခြားတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆို ငှက်ပျော်သီး အစိမ်း သို့ ဝင်းရောင်ငှက်ပေျာ်သီးတွေမှာရှိတဲ့ကစီဓာတ်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်ခုခံအားတစ်ရပ်ကိုပေးသော်ငြား လည်း အစာချေဖျက်ဖို့ အတွက်တော့ အနည်းငယ် ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့ငှက်ပျော်သီးအမှည့် ကိုစားပေးတာပိုကောင်းပါတယ်.
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ အားလုံးသိတဲ့ မှို ပါပဲရှင်…
မှိုကိုချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါ မှိုထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် ဘီဓာတ်တွေ ပျောက်ဆုံးကောင်း‌ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လည်း မှိုကို အပူလေး နည်းနည်းပေးရုံနဲ့ ရရှိလာမယ့်ကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ချို့လည်းရှိပါသေးတယ်. မှိုဆိုတဲ့သဘောက များသောအားဖြင့် အဆိပ်တွေကို စုပ်ယူတတ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ချက်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ ပါဝင်နေတဲ့အဆိပ်တွေကိုပြေပျောက်စေနိုင်သလို အမ်တီအောက်ဆီဒင့်လို လူတွေကိုအကျိုးပြုမယ့် ဓာတ်တွေ လည်းပိုတိုးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ဟာ သက်သတ်လွတ်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါက အကြံဉာဏ် ပေးချင်တာကတော့ မှိုကို ပြုတ်တာ ကြော်တာတို့လုပ်မယ့်အစား ကင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် မိုက်ခရိုဝေ့ထဲ အပူပေး လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ် စားသုံးခြင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပိုပြီးရနိုင်ပါတယ်။
တတိယတစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်သုံးတတ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးဖြစ်ပါတယ်…
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ များသောအားဖြင့် အစိမ်းအတိုင်းသုပ်စား ဖြစ်ကြတာများပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ချို့ ကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးကိုချက်ပြုတ်စားခြင်းဟာ ဗီတာမင် စီ ထက်ပိုကောင်းပြီး လူကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုတောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ (lycopene)လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကို ပိုတိုး လာစေပါတယ်. ပြီးတော့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးတွေဟာ ပိုနူးညံ့တာကြောင့် အစာချေစနစ်အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ မနက်တိုင်းလိုလိုစားလေ့ရှိတတ်တဲ့ ‌ပေါင်မုန့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပေါင်မုန့်လေးကိုမီးကင်ပြီးစားသုံးမယ်ဆိုရင် သွေးတွင်းကသကြားဓာတ်ကိုတိုးလာစေတဲ့ (glycemic index)ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကို ရှောင်ရှားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် ဆီးချိုသမားတေွအတွက်အထူးသင့်တော် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ‌ပေါင်မုန့်အညိုကို စားသုံးပေးချင်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အ‌ထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ (antioxidant) ဓာတ်တွေအပြင် တစ်ခြားပေါင်မုန့်အမျိုးအစားတွေထက် ဗီတာမင် ဘီ ပါဝင်တာ ကြောင့် လွယ်ကူစွာအစာချေဖျက်နိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့ အစာအာဟာရဓာတ်တွေစုပ်ယူရာမှာလည်း လွယ်ကူစေပါတယ်။
MyFood Myanmar2021-09-01T11:08:39+06:30December 2nd, 2020|Health, Knowledge, Tips & Stories, စားသောက်ဖွယ်ရာများအကြောင်း - Food Stories, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ - Kitchen Utensils, ဟင်းချက်ဖွယ်ရာများ - Ingredients|